यी आसन प्रयोग गरी सेक्स गर्नुस्, खुसी हुन्छन् महिलाहरु
काठमाडौं । सेक्सप्रति महिलालाई पनि उत्तिक्कै रुचि, जति पुरुषलाई हुन्छ । तर सेक्सका क्रममा महिलालाई मन पर्ने आसनबारे पुरुषले ध्यान दिंदैनन् । संसर्ग दुवैको सहमतिमा तर सन्तुष्टि पुरुषको भागमा मात्र हुँदा सुखमय यौन जिवनमा फाटो आउन सक्छ । त्यसैले महिलाको सन्तुष्टि प्रति पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
महिला आफ्नो मन पर्ने आसनलाई दवाएर भएपनि पुरुषले मन पराउने आसनमा सम्भोग गर्न तयार हुन्छन् । तर अब पुरुषले पनि महिलालाई मन पर्ने आसनबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ । दुवैले उत्तिकै चरमसुख पाउने गरि सम्भोग भएमा तपाईंको यौन जिवन जहिले पनि सुखमय हुन सक्छ । महिलाले मन पराउने उत्कृष्ट पाँच आसन तल उल्लेख गरिएको छ ।
२. आँखा जुधाएर गरिने आसनः महिला र पुरुषमा यो आसन सामान्यतया परिचित आसन हो । अल्छिलाग्दो भए पनि सामान्यतथा सम्भोगको सुरुवात यही आसनबाट हुने गर्दछ । आधुनिक महिलामा यो आसन लोकप्रिय मानिन्छ । महिलाले यो आसनका क्रममा यौन साथीसंग आँखा जुधाउन पाउँदा धेरै सन्तुष्ट हुन्छन् ।
३. काउगर्ल आसनः यो आसन महिला पुरुषको उत्तेजनालाई चरम उत्कर्षमा पुर्याउने आसन हो । सम्भोगका समयमा महिलाले पुरुषलाई जिस्काउन मन पराउँछन् । महिला यो आसन अन्र्तगत पुरुषको शरीर माथि बसेर उफ्रीन मन पराउँछन् । महिलाको क्रियाकलाप बढि हुने यो आसनमा पुरुषको भुमिका निक्रिय जस्तै हुन्छ । महिलाले आफ्नो इच्छा पुरुष यौन अंग खेलाएर चरमसुख लुट्ने गर्दछन् ।
५. उठेर गर्ने आसनः कहिलेकाही महिला सम्भोगको समयमा खाटबाट उफ्रने र उठेर गर्न मन पराउँछन् । यो आसनमा महिला उठेर नै पुरुषबाट आफुलाई सम्भोग गराउन चाहन्छन् । यो आसन अन्र्तगत सामान्यतया महिलाहरु डायनिङ टेबुलमा सम्भोग गर्न रुचाउंछन् ।